Ukuvakashela kahle e-Staniel Cay e-Bungalow yangempela - I-Airbnb
Ukuvakashela kahle e-Staniel Cay e-Bungalow yangempela
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Natajia
Le bungalow enhle inikezwe izinga elihle. Ngiyindawo ekahle yokuhlala esiqhingini esizolile, esitholakala ku-Exuma Cays. Sikholelwa ukuthi kuyindawo yokugcina ukuzwa lesi siqhingi ngendlela okufanele sibe ngayo. Lungela ukukhuthazwa!
I-Kickback futhi uphumule kunanini ngaphambili. Sekukonke, injabulo eqinisekisiwe nokuphumula. Usuku lonke. Ngokuvakasha kwezingulube zokubhukuda ezinesaphulelo njenge-cherry phezulu!
Le bungalow enesitayela esihle futhi ephefumulelwe yase-Bahamian yenza indawo ekahle yokubalekela esiqhingini. Ilungele imibhangqwana efuna "ikhaya kude nekhaya" noma ikhefu lothando. Iphinde ifanele abahambi abahamba ngabodwana abafuna ukuya endaweni yaseStaniel Cay. Ilungele abantu abafuna okokuzithokozisa okunethezeka kwe-Airbnb I-Perfect uma ufuna ukuphila impilo yasesiqhingini yangempela. Kusukela olwandle oluhlanzekile ukuya endaweni emangalisayo yemvelo. Inethezekile, izolile futhi elula. Sithanda ukuhamba lelo mayela elengeziwe ukuze uzizwe sengathi usekhaya. Ngaphandle kokungabaza, le ndawo yenza "imvuselelo yesiqhingi" yeqiniso kulabo abayidingayo. Siyaqiniseka ukuthi uzolijabulela leli khaya njengoba senza.
- Ukuthatha isikhumulo sezindiza samahhala
-Ilineni yombhede wekhwalithi ephezulu (sicela uyibeke phansi uma uthola “izinga eliphezulu” futhi
- Amathawula (okubandakanya ezasekhaya kanye nolwandle)
- Indawo epholile yokubalekela olwandle
- Ukuhlanza nsuku zonke (kufakwe mahhala)
- Izindlu zangasese ezinobungani bemvelo
- I-WiFi yamahhala
Siqinisekisa ukuhlala kwangasese. Akukho ukwabelana, akukho ukuphazamiseka. Sizohlangana nawe lapho ufika futhi sitholakale kuwe kukho konke ukuhlala kwakho uma futhi kudingeka ukuze sihlele yonke into kusukela ekuqashweni kwenqola yegalofu kuya kuhambo lwesikebhe.
Sikunikeze itiye nekhofi ngakho-ke osekusele kuwe ukuthi uphumule futhi uzinze ngemva kohambo lwakho. Noma uma uthanda, ungajabulela ishawa eliqabulayo; siye sagcwala amagumbi okugezela ngezinto zokugeza ezithambile ecofriendly.
- Isaphulelo sika-30% ohambweni lwezingulube zokubhukuda
- Isaphulelo sika-30% sokuqasha inqola yegalofu
Izinsiza zegumbi lokuhlala
- Ifakwe ngokuphelele futhi yakhelwe kahle
- Ifriji encane efakwe ngokugcwele kanye ne-microwave
- Izinto zokugeza
- Umshini wokomisa izinwele
- Umbhede ophindwe kabili onethezeke ngokwedlulele
- Ilineni eliphezulu lombhede
- I-grill yangaphandle iyatholakala ukuze isetshenziswe izivakashi
- Pool iyatholakala amahora 24
- Amathawula nokupholile kulungele ulwandle
I-bungalow ayinamsindo kulo lonke. Uhlobo oluhle lokuzihlukanisa. Lokhu kusho ukuthi ungajabulela isimo esithule ngempela nesisekhaya. Uzothola ukuphumula okudingeka kakhulu, ulale ujule kunanini ngaphambili lapho usepharadesi. Sekukonke, indawo ethule kodwa ekhetheke ngendlela emangalisayo.
Xhumana nathi namuhla ukuze uthole okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele kwe-BnB! Singathanda ukukwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya. Nganoma yimiphi imibuzo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.
I-Kickback futhi uphumule kunanini ngaphambili. Sekukonke, injabulo eqinisekisiwe nokuphumula. Usuku lonke. Ngokuvakasha kwezingulube zokubhukuda ezinesaphulelo njenge-cherry phezul…
Ukusikisela kwabaqapha abantwana
4.78 (izibuyekezo ezingu-32)
Le ndawo iyamangalisa unyaka wonke ngokuvakashela iStaniel Cay. Ngamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka yonke indawo, ama-Exumas ayiqoqo elingavamile lezindawo zamaphupho. Amabhishi angenazo izinyawo, izinsizakalo ezikhethekile neziqhingi ezifanele osaziwayo kwenza leli pharadesi elishisayo libe yitshe eliyigugu. Lapha, imvelo idlula umuntu ngobuningi, izindawo ezisogwini zihlala zingenasici futhi amakhaya angasese adlala ezinye zezinkanyezi ezidume kakhulu emhlabeni. Ama-Exumas ngempela ayindlela yokuphunyuka yokugcina.
Imithwalo okufanele yenziwe kukho konke ukunambitheka, kusukela ekuhambeni kwangaphandle kwabahloli besiqhingi kuya ekubeni bodwa okuphelele kwalabo abakhetha abasekhaya nabathokomele!
I-Exuma Cays yaziwa ngezinto zethu ezimangalisayo zemvelo ezifana nezingulube zokubhukuda e-Pig Beach, i-Petting Sharks e-Compass Cay, i-Thunderball Grotto's exquistic snorkeling, i-sandbar ende, i-iguana yendabuko e-Guana Cay. Osaziwayo abavela eduze nakude beze ukuzovakashela futhi babone lezi zindawo ezikhangayo.
I-Staniel Cay indawo ekahle uma ungathanda ukubona lezi zikhangayo. Lesi siqhingi sitholakala nje imizuzu emi-5 ukusuka e-Pig Beach, sigcwele abantu bendawo abanobungane futhi sinezindawo zokudlela/amabha kanye nezitolo ezi-3 zegrosa ezitholakala esiqhingini.
Sizojabula ukukwenzela zonke izidingo zakho ngesikhathi sokuhlala kwakho ukuze wenze uhambo lwakho oluya e-Staniel Cay lube ongeke ulukhohlwe. Sizohlangana nawe esikhumulweni sezindiza lapho ufika futhi sikunikeze ukudluliswa kwezindiza mahhala futhi sikuyise mathupha ukuze ungene, siphendule noma yimiphi imibuzo onayo, sikunikeze iseluleko sendawo kanye nezikhombisi-ndlela njengoba kudingeka. Ungangabazi ukusithinta uma udinga okuthile, kusukela kumathawula engeziwe kuya kuzincomo zasendaweni. Sizokujabulela ukukusiza nganoma yiziphi izidingo ongase ube nazo phakathi nokuvakasha kwakho. Ngaphandle kwalokho, sizokushiya ujabulele ukuhlala kwakho.
Sizojabula ukukwenzela zonke izidingo zakho ngesikhathi sokuhlala kwakho ukuze wenze uhambo lwakho oluya e-Staniel Cay lube ongeke ulukhohlwe. Sizohlangana nawe esikhumulweni sezin…